मुख्य समाचार Archives - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
२०७८ मंसिर १६ गते ०:४१
१६ मंसिर, काठमाडौं । चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशाँै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उमेदवार भिम रावल अर्का उमेदवार केपी शर्मा ओली सँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भए । यद्यपी उनीप्रति एक खालको सहानुभुती देखिएको छ । केपि ओली सँग हार्छु भन्ने जान्दा जान्दै पनि अन्तिम...
२०७८ मंसिर १५ गते १७:५६
१५ मंसिर, काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले हिन्दु र बौद्ध धर्म जोगाएर प्रवर्द्धन गर्दै अघि बढ्ने हो भने नेपाललाई विश्वकै तीर्थस्थल बनाउन सकिने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको पार्टीको एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले धर्मनिरपेक्ष घोषणा नेपालको धर्म संस्कृति मास्ने...
२०७८ मंसिर १५ गते १६:१३
१५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।...
२०७८ मंसिर १५ गते १२:३७
१५ मंसिर, क्यानवेरा । अष्ट्रेलियाकाे संघीय संसदका एक तिहाइ कर्मचारीमाथि याैन दुर्व्यवहार हुने गरेकाे एउटा प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ । संघीय संसद्की एक पूर्वकर्मचारीले मन्त्रालयमा नै याैन दुर्व्यवहार भएकाे गुनासाे सार्वजनिक भईरहेका बेला प्रतिवेदन तयार पारिएकाे हाे । उनकाे भनाई सार्वजनिक भएसँगै क्यानवेरामा हुने याैन...
भीम रावलले हार्ने कन्फर्म भईभई पनि ओलीसँग भिडिरहनुको रहस्य खोले !
२०७८ मंसिर १५ गते १०:५९
१५ मंसिर, काठमाडौं । भीम रावललाई प्रष्ट थाहा छ, उनी चुनाव जित्दैनन्। तर, पनि अन्तिमसम्म पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने अडान राखे। रावलकै अडानका कारण एमालेको १० औं महाधिवेशन ‘सहमति’को बन्न सकेन। अध्यक्षलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्न चुनावी वातावरण बन्यो। आखिर रावलले केपी ओलीलाई सर्वसम्मत...
२०७८ मंसिर १५ गते १:३७
१५ मंसिर, काठमाडौं । चितवनमा जारी एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको महाधिवेशनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्चको एमाले कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । सात करोड ५० लाख अनुमान गरिएकोमा दुई दिन लिम्बँदा नौ...
२०७८ मंसिर १४ गते २०:०४
१४ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको पदाधिकारीमा पराजित नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुसाल केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका छन् । मतपरिणाम अनुसार रावल र भुसाल केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका हुन् । केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले ९०४ मत र घनश्याम भुसालले १२६४ मत ल्याएका थिए ।...
२०७८ मंसिर १४ गते १६:१५
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा सर्वाधिक मत ल्याएर अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएकी छन् । चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा भएको मतदानमा शाक्यले १९७६ सर्वाधिक मत ल्याएर निर्वाचित भएकी हुन् । उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा बादल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, युवराज ज्ञवाली निर्वाचित...
एमाले अध्यक्षमा केपी ओली विजयी : ओलीलाई १९०० मत, रावलको १९६ मत पर्‍यो !
२०७८ मंसिर १४ गते १५:४९
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका छन् । चितवनको सौराहामा भएको १०औं महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार भएको मतदानमा प्रतिस्पर्धी डा भीम रावललाई भारी मतान्तरले हराउँदै अध्यक्षमा पुनः ओली निर्वाचित भएका हुन् । एमाले...
फेरी चित्त बुझेन भिम रावलको, आधा प्रतिनिधीले भोट हालिसके पछि झिके बखेडा
२०७८ मंसिर १४ गते ९:५९
१४ मंसिर, काठमाडौं । नयाँ नेतृत्व चयनका लागी भइरहेको एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मतदानमा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्ष पदका उमेदवार भिम रावलले आपत्ती जनाएका छन् । भिम रावलकै जोडबलका कारण नेतृत्व चयनका लागी एमाले महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने सकेन र अन्तत चुनावमै गएको...
123 … 163 पछिल्ला »